I-BMW M5 entsha isidonsa ngamasondo amane | Isolezwe
I-BMW M5 entsha isidonsa ngamasondo amane
ezezimoto / 8 April 2018, 11:01am / FANELESIBONGE BENGU
AYIKHO into ejabulisa njengokufika kwesimemo sokuyoshayela imoto entsha.
Okujabulisa kakhulu wukuyoshayela imoto eseqophelweni eliphezulu futhi osuke wafunda, waphinde wabuka nezithombe zayo phambilini.
Kube yinto efanayo nakwiBMW M5 ngoba ozakwethu abayizintatheli zezimoto bebejabule okwezingane ezincane zithola amaswidi. Nasezinkundleni zokuxhumana wonke umuntu ubevele akhale uma ebuka izithombe.
Okuconsisa amathe kakhulu ngeM5 entsha wukwanda kwamandla ayo nangokuthi isidonsa ngamasondo womane kwazise ineM-specific all-wheel-drive system M xDrive entsha.
KwaBMW South Africa basimemele eKyalami Grand Prix Curcuit ukuthi siyoyizwa kahle amandla ayo endaweni ephephile.
Le M5 ngeyesizukulwane sesithupha kusukela yaqala ukwakhiwa ngo-1984.
Ngebhadi siyishayele nje ama-lap amathathu noma sizungeze umzila olinganiselwa ku-4km kathathu.
Kuso leso sikhashana ngikwazile ukuzwa amandla ayo angu-441kW netorque engu-750 Nm. Wonke la mandla aphekwa yinjini engu-4.4 litre eyiV8 futhi eyitwin-turbo.
Uma isuka ungafunga ukuthi unyazi ngoba ngemizuzwane engu-3.4 isuke isifike ku-100km/h . Ku-200km/h kuyithatha imizuzwana engu-11.1. Izishintsha yona u gearbox oyi eight-speed M Steptronic kodwa uma uthanda uyakwazi ukuyishintsha ngegiya noma kumaM shift paddles ngemuva kwesiteringi.
Ijubane layo ligcina ku-250 km/h kodwa uma uyigaxa iM Driver’s Package agcina ku-305 km/h .
Izwakala ilula uma uyishayela, ungathi yimoto nje encane hhayi i-sedan. Amakhona iwabamba ngaphandle kokuxakeka okuncane futhi uthi uphuma kuwo ube yinhlamvu. Okuyenza ibhalanse kakhulu yikho ukuthi indosa ngawo wonke amasondo kodwa amandla amaningi iwafaka emasondweni angemuva. Uma uthanda uyakwazi ukuyikhetha ukuthi idonse ngawangemuva kuphela.
Izinqawe zangemua uzizwa zibhonga futhi ungaphandle zinomsindo mawala.
Ukwazi nokiyifaka ku-4WD Sport mode uma ufuna ibe namandla kakhulu. Kuba kumshayeli ukuthi ufuna ukuyithi ihambe kahle kuComfort, Sport noma kuSport Plus.
IBMW M5 entsha inyathela ngamasondo angu-276/40 R19 ngaphambili kanti ngemuva angu-285/40 R19 ngemuva. Inamarimu ayi five-double-spoke cast ligh-alloy wheels kanti uma uthanda uyigaxa angu-20 inch.
Lamasondo angenye yezinto engeza ubuhle beM5. Iphinde ibe nobhampa omushe ngaphambili onama-air intakes amakhulu enza ukuthi kungene umoya owanele wokuthola iphole.
Iphinde ibe nemibala egqamile okubalwa kuwo uMarina Bay Blue Metalic neminye.
Ngaphakathi ivulekile futhi ilayishe abagibeli abane kanjalo nebhuthi likhulu. Izinto eziningi zibhekene nomshayeli njenge digital instrument cluster enkulu, amabhathini okusetha iM xDrive all-wheel-drive system neDrivelogic kanti iphinde ibe neHead-Up Display.
Ngaphakathi yonke into yakhiwe kusetshenziswa okuseqophelweni eliphezulu kodwa. Ifika nezihlalo zesikhumba.
Kukhona neM5 yekhethelo iFirst Edition okwakhiwe angu-400 emhlabeni jikelele. Kuleli kulethwe amahlanu kuphela futhi asedayiswe aphela. Ihluke ngombala wayo iFrozen Dark Red Metallic kanjalo ne-grille, M gills nezinqawe ezine ngemuva zifika zihlukile.
Inyathela ngamasondo angu-20 inch seven-double-spoke light-alloy wheels amnyama.
Ngaphakathi iqoshwe nokuthi ingeyesingaku kwangu-400.
IBMW M5 iyimoto ezoyiphonsela inselelo izimbangi okubalwa kuzo iMercedes-AMG E63. Ibiza kahle futhi indlela ehamba ngayo yimoto ongeke nakancane uze uzisole ngokuba nayo ngoba imnandi.
Inani elihlanganisa neVAT engu-15%
BMW M5 R1 747 500
BMW M5 FIRST EDITION R2 008 700
Ifika neBMW Motorplan maintenance contract yeminyaka emihlanu noma u-100 000 km. Iyakwazi ukunyuka ibe ngu-200 000km uma uthanda.